जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरमा कांग्रेसको मात्रै उम्मेदवारी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २५, २०७९ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरमा प्रमुख, उपप्रमुखदेखि सदस्य सबैमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । प्रमुख, उपप्रमुखसहित ९ जना सदस्यको मात्रै उम्मेदवारी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा दुर्गा बोहरा र उपप्रमुखमा रामकुमारी रानाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । यसैगरी, सदस्यहरुमा जयसिंह विष्ट, रामसिंह भण्डारी, मोहन महता, अञ्जुदेवी राना, लिला चौधरी, चन्द्रा देवी थापा र विमलाकुमारी सार्की रहेका छन् । स्थानीय तहको प्रम्खु उपप्रमुखमा कांग्रेसको एकल बहुमत भएकाले उनीहरु निर्विरोध हुने देखिन्छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत मदनबहादुर धामीका अनुसार बिहीबार उम्मेदवारमाथि दाबी/विरोध, शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ता र शनिबार मतदानको कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ २०:४७
जिसस दाङमा गठबन्धनको एकल उम्मेदवारी
जेष्ठ २५, २०७९ दुर्गालाल केसी
दाङ — जिल्ला समन्वय समितिमा सत्ता गठबन्धनको एकल उम्मेदवारी परेको छ । जेठ २९ गते हुने निर्वाचनका लागि बुधबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुले मात्रै मनोनयन दर्ता गरेका छन् । एमालेलगायतका अन्य दलले मनोनयन दर्ता गरेनन् ।
गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखसहित ६ सदस्य कांग्रेसले पाएको छ भने माओवादी केन्द्रले २ सदस्यमात्र पाएको छ । प्रमुखमा कांग्रेसका नित्यानन्द शर्माको उम्मेदवारी परेको छ । शर्मा राप्ती गाउँपालिका ७ बाट सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उपप्रमुखमा कांग्रेसकै चेतना चौधरीले उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनी बबई गाउँपालिका ७ बाट सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
कांग्रेसबाट खुला सदस्यमा कुलबहादुर बुढा, महिला सदस्यमा हरिदेवी पोखरेल, कल्पना शेर्पाइली, जुनकुमारी बुढा र कल्पना शेर्पाइली तथा दलित महिला सदस्यमा सरस्वती नेपालीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
खुला सदस्य बुढा लमही नगरपालिका ७ बाट सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । महिला सदस्य पोखरेल घोराही उपमहानगरपालिका ९ बाट, शेर्पाइली घोराही १३ बाट, बुढा घोराही १४ बाट र दलित महिला सदस्य नेपाली तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १४ बाट सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट खुला सदस्यमा टोपाराम चौधरी र दुर्पति चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । टोपाराम दंगिशरण गाउँपालिका वडा नं. ३ बाट सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । दुर्पति राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ बाट सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले १ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र दुई गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको छ । माओवादी केन्द्रले तीन गाउँपालिकामा अध्यक्ष जितेको छ । एमालेले २ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका साथै १ गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ २०:४४